Soo galootiga oo la sheegay ineey guryo la’aan soo food saareeyso | Somaliska
Dadka dalkaan soo galootiga ku ah ee ay degmooyinka dalka siiyeen guryo kmg ah, ayaa haatan waxaa la sheegaya in ay wajihi doonaa guryo la’aan marka lagaarso sanadka soo socda.
Dadkan oo tiradoodu gaareyso lixdan kun oo dalka ku cusub ayaa bisha maarso ee sanadka dambe waxaa ku eg heshiish-kii guri ee ay degmooyinku siiyeen. Mana muuqato qorshe diyaar garoow la xirriira siddii looga hortagi lahaa guryo la’aantaasi.
Degmadda Haninge, waxaa ay ku taala bartamaha magaaladda Stockholm halkaas oo xisbiga talada haya uu ku xoog badan yahay maamulkiisa. Mas’uulinta gobolka oo mar wax laga weeydiiyey sida dadkaasi la yeelayo ama la dejin doono ayaan u heeyn jawaab waaxid ah.
“Waxaan qabaa in degmooyinka dalka oo dhami ay dhibaato ka heeysato xal u helidda mashqadan, waxaa muuqata oo keliya in dad kooban heli karaan guryo ay dagaan, gaar ahaan qoysaska carruuraha leh” ayuu yiri Jesprer Schönberg oo ka howl gala demaddaasi Haningen.
Dhinaca kale Degmadda Nacka, waxeey qudheeda ku taala magaaladda caasimadda ah waxaana maamula xisbiga modaraat-ka. Degmaddan ayaa muddo labbo sanno laga joog waxaa la dejiyey soo galooti kun kor u dhaafay. Balse haatan maamulku wuxuu bilaabay inuu adkeeyo sharciyada guryaha ee dadyowga uu degmadda soo dejiyo.
oo uu xisbiga Modaraad-ku xukumo ayaa laba sano ka hor degmadaas dejisey soogalooti cusub oo kor u dhaafaya ilaa iyo kun qof laakiin maamulka degmadaas ayaa hadda adkeynaya sharciyada guryaha ee dadkaas degmadooda lagu dajiyey.
Ugu dambeyntii ma ahan waxa qeylo dhaanta la xirriirta guryo la’aanta ay ka taagan tahay gobolka Stockholm ee degmooyinkiisa balse, dalka oo dhan ayaa haatan waxaa ka jira cabasho la xirriira guryo la’aan.
Soomaali khaat Norway u waday oo la qabtay